Anonyanya kuratidza mabasa aAlexander Dumas | Zvazvino Zvinyorwa
Jeri kwaive neCount of Montecristo
Pazuva rakadai nhasi #Alexander Dumas, uye mumwe wedu Mariola anga achitarisira kukuunzira mangwanani ano mazwi akanakisa emunyori, zvese kubva kuna baba nemwanakomana. Unogona kuverenga pano. Kune rimwe divi, sechinyorwa uye chemanheru chinyorwa tinokupa iwe pachiitiko ichi mabasa ekufananidzira aAlexander Dumas uye tinokupa zvikonzero zvekuaverenga kana usati wambozviita. Nderipi remabhuku ese rakanyorwa naDuma raunofarira?
1 "Vatatu Musketeers" (1844)
2 "Kuverenga kweMonte Cristo" (1845)
3 "The Medicis" (1845, rakaburitswa muna 2007)
4 "Iyo nhema tulip" (1850)
5 "Murume ari mu Iron Mask" (1848)
"Vatatu Musketeers" (1844)
Kuita kwebhuku iri kunoitika panguva yekutonga kwaLouis XIII, muFrance. D'Artagnan jaya rine makore gumi nemasere, mwanakomana weGascon nobleman, aimbove musketeer, ane mari shoma. Anoenda kuParis netsamba yakabva kuna baba vake kuna Monsieur de Treville, mukuru weMambo Musketeers. Paimba yevaeni, panguva yekufamba kwake, D'Artagnan anodenha murwi anoperekedza mukadzi akanaka uye asinganzwisisike. «Vatatu Musketeers " rinenge riri basa rinozivikanwa kwazvo re Alexander dumas. Uye kana ikasarira bhero nekuda kwebhuku, zvirokwazvo ichaita nekuda kwenhamba yenguva ino rovhero yakatorwa kutorwa mufirimu neterevhizheni.
Hapana zvirinani kupfuura inoverengeka yekunakidzwa nemitambo yevatatu musketeers.
"Kuverenga kweMonte Cristo" (1845)
Imwe yemabasa makuru a A. Dumas. Iyo yakasimba adventure yekufungidzira. Kupunzika kwechikepe, matorongo, kupukunyuka, kuuraya, kuuraya, kutengesa, kumupa huturu, kutevedzera, mwana akavigwa ari mupenyu, mukadzi mudiki akamutswa, makanda emakuva, vanobiridzira, vapambi ... Zvese kuti vagadzire zvisingaiti, zvisingawanzo, zvinonakidza mamiriro, akagadzirirwa iye superman uyo inofamba mairi. Uye izvi zvese zvakaputirwa murungano rwetsika, zvakafanirwa kuyerwa vachipesana nevanhu venguva yaBalzac. Iri basa rinotenderera nepfungwa yetsika: zvakaipa zvinofanirwa kurangwa. Kuverenga, kubva pakureba uko kunomupa huchenjeri, hupfumi uye manejimendi yetambo dzechikamu, chinomira se "ruoko rwaMwari" kuitira kugovera mibairo uye kurangwa, kutsiva hudiki hwake hwakaputswa uye rudo. Iri basa rekuti ufare uye unzwe zviitiko zvekuverenga iye padyo padyo neiyo nerondedzero yakaisvonaka inogadzirwa nemunyori wayo.
"The Medicis" (1845, rakaburitswa muna 2007)
Iyi mhuri, inotungamirwa naJuan de Medici, yaive pamusoro pekuchengetedza nekusimudzira tsika yeFlorence, guta ravo. Around iye akapenya akakosha manhamba mumunda wehunyanzvi uye ruzivo, saDonatello, Michelangelo, Galileo, Mantegna, Machiavelli kana Leonardo da Vinci. Iyi ndiyo nyaya yavo vese. Iyo nyaya iyo Alejandro Dumas anotiratidza iyo nyaya yemhuri, iyo, mukati medzidziso uye nekurwira panguva iyoyo, vakaita mutsauko nerudo rwavo rwehunyanzvi uye rutsigiro rwavo rwetsamba nesainzi, sekunge sekunge kune iyo nhaka nhaka ichave iri , kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa.
"Iyo nhema tulip" (1850)
Idzo hama dzaDe Witt, dzakachengetedzwa naMambo mukuru Louis weFrance, vachawana kufa kwavo mumaoko evagari vakapenga veHague, vanovatenda semhosva yekurangana. Asi vasati vafa, vachasiya mwari wavo Koneriyasi mamwe magwaro anokanganisa anozomuendesa kujeri, uko, mune kambani yejaya Rosa, iye achanoedza kutora izvo zvaanoshuvira kwazvo munyika: dema tulip girobhu. Netarenda rake renguva dzose rerondedzero, Alexander Dumas anoisa mune ino nhoroondo yezvinyonganiso zvese zvinodiwa kuti abate muverengi kubva papeji rekutanga nekumunyudza munzanga ine hukasha yechiDutch yekupera kwezana ramakore regumi nemanomwe.
"Murume ari mu Iron Mask" (1848)
Iye murume mune mask mask ndeyenyaya yaive yatove chikamu chekutanga chemabhuku akarondedzerwa pano: "Vatatu Musketeers." Mune ino nyaya munhu asingazivikanwe anoratidzwa uyo akaiswa mujeri nekuda kwezvikonzero zvisingazivikanwe mutirongo reBastille. Alexander Dumas anomuratidzira semapatya hama yaMambo Louis XIV.
Iri bhuku rine zita zvakare "Viscount yeBragelonne".
Uye iwe, nderipi kana rimwe remabhuku aya naAlexander Dumas iwe uchiri kufanira kuverenga? Ndeipi yaungatanga nayo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » The zvikuru chiratidzo mabasa Alexander Dumas
Diego Gutierrez akadaro
"The Count of Monte Cristo" harisi bhuku rangu randinoda reDuma. Iri ibhuku rangu randinofarira renguva dzose. Akakodzera nzvimbo yekutanga hahahahahaha. Chinyorwa chakanaka.
Pindura Diego Gutiérrez
Naome Novik anokunda iyo Kelvin 505 Mubairo weruzivo rwake "Rima Rungano"